Izincwadi zeRomanticism zasishiya kanjani eSpain? | Izincwadi Zamanje
Izincwadi ze-Romanticism eSpain zisishiyelani?
UCarmen Guillen | | Umlando wezincwadi, Literatura, eziningana
Sisafunda okwakudala, yebo. "I-Quijote" iyaqhubeka nokukhuphuka ngama-windmill ayo amakhulu futhi "Amanoveli ayisibonelo" kwabakhulu Cervantes zisanconyelwa ukufundwa ezikhungweni eziningi zaseSpain ngesihloko sabo soLimi Nezincwadi. Kepha okwakusele ngesikhathi se- Izithandani zaseSpain?
Umsebenzi we "UDon Juan Tenorio" kwabakhulu UJose Zorrilla isabanjiswa ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini eziningi zaseSpain naseSevillian Qeda angazizwa aziqhenya ngoba izinkondlo zakhe azikafi ngenxa yokubonga uthando lwentsha. Kepha, ingabe imisebenzi kaJosé de Espronceda noma uMbusi waseRivas usafundwa? Ngabe basekhona abantu abeza ematafuleni emibukisweni yezincwadi befuna okuthile kuRosalía de Castro noma eMariano José de Larra?
Mhlawumbe kuyihlazo ukuthi isikhathi esinzima kangaka nesiphikisayo sikhohliwe maqondana nokwenziwa kwemisebenzi. Kwakunzima ngesikhathi sayo, kwakukhona ukungezwani okuningi kwezepolitiki kanye nabantu abambalwa abangajabule, okwaholela ekutheni kube nemibhikisho eminingi, ikakhulukazi phakathi kwabasebenzi. Futhi kwakunzima ukuthola indawo phakathi kwe-neoclassical engaka. Noma kunjalo, i- Romanticism uqhubekele phambili futhi kunemisebenzi eminingi esingayijabulela kusukela kuleso sigaba esimangalisayo.
Imisebenzi ye-Romanticism yaseSpain
Ungakusho lokho UJose de Espronceda Wayengumuntu othandwa kakhulu ngaleso sikhathi. Ushiye isikhundla sakhe se-neoclassical ukuze abhale izinkondlo zothando. Izinkondlo zakhe eziphawuleka kakhulu yilezi "Ingoma yesigelekeqe", "Umkhiphi wesigwebo" o "Ingoma yeCossack", kodwa ngaphezu kwakho konke, umsebenzi wakhe owaziwa kakhulu futhi owaziwa kakhulu "Umfundi waseSalamanca", eyabhalwa ngo-1840. Ingumbhalo oqukethe amavesi angama-2000 osayizi abahlukene abalandisa ngokufa kothando luka-Elvira, lapho kushona othandekayo wakhe uDon Félix de Montemar.
Enye ye abalobi be-Romanticism Isici esivelele ngalesi sikhathi futhi esivele sishiwo kule ndatshana yiSevillian UGustavo Adolfo Becquer. Umsebenzi wakhe uqukethe imilolotelo y izinganekwane ohlangothini lwezothando olucace bha. Okwabo izinganekwane bebengama-28 phakathi kwawo okuhehe imfihlakalo nezinto ezingaziwa. Okwabo imilolotelo Zizonke ziyizinkondlo ezimfushane ezingama-79 ezaqanjwa impilo yakhe yonke. Kuzo ukhuluma ngothando nobuhlungu benhliziyo, ukufa, izingqikithi zenkolo nobuthakathi.
Isi-Galician URosalia de Castro kuphinde kwagqama ngalesi sikhathi. Umsebenzi wakhe ogqame kakhulu owokuthi «Izingoma ze-Galician», lapho elandisa khona ukulangazelela umhlaba wakhe odumile nezindikimba ezahlukahlukene ezidumile.
Kunezincwadi eziningi ezisemakethe yezincwadi njengamanje; Kubaluleke kakhulu ukufunda i- "Don Quixote" noma ezinye izincwadi zakudala zaseSpain, kepha imisebenzi ezalelwe kwi-Romanticism yaseSpain nayo mihle kakhulu futhi akumele siyizibe.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Umlando wezincwadi » Izincwadi ze-Romanticism eSpain zisishiyelani?
Uma ungaba nezincwadi eziyi-10 kuphela?